J: Extra-Ordinary KIDs
အခု ၇နစ်ရှိတဲ့ ကော်နီတဲဘုတ် Connie Talbot နဲ့၅နစ်သမီး ယူရန်း with Yoo Ye Eun တို့ တွဲပြီး သီချင်းလေးတပုဒ်ဆိုခဲ့တာ ကြည့်ကြရအောင်. ကော်နီတဲဘုတ်ရဲ့ အကြောင်းကိုအောက်ဘက်မှာ ဆက်ဖတ်ပါ။
ယူကေမှာ Britain got Talentဆိုတဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ ၆နစ်သမီးလေး ကော်နီ တယ်ဘုတ် က ချစ်စဘွယ် ၀င်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ် လုံးဝမထင်ထားတဲ့ အေးမြတဲ့ အသံ လေးနဲ့တကမ္ဘာလုံးက နားထောင်တဲ့ ပရိဿတ်ကို ဆွဲဆောင်သွားတာပါ။ ကံဆိုးချင်တာက သူ့ ထက် အဆများစွာ အသံအောင်လွန်းတဲ့ သူ ပေါပေ့ါပ် ကို ရှုံးသွားပေမဲ့ လူတိုင်းရဲ့ အသဲထဲမှာ အေးမြတဲ့ သံစဉ်လေးတွေ စွဲညှိစေခဲ့ပါတယ်။
သူမကို ဘယ်သူမှ သီချင်းဆိုပုံ မသင်ပေးပါဘူး။ သူ့ အမေက ပေါင်၄၀တန် ကာရာအိုကေ စက်တလုံးဝယ်ပေးပြီး သူ့ ဖာသာ အဆိုလေ့ကျင့်ပါတယ်။ သူသီချင်းစဆိုတာ က ၁နစ်လောက် ကထဲက ပါ။ ၃နစ်သမီးအရွယ်မှာ သူ့ အဖွား (နာနီ) နေမကောင်းတော့ သူက သီချင်းဆိုပြီး ရောဂါတွေ သက်သာအောင် ဖေးမပေးပါတယ်။ သူ့ အဖွားဆုံးတော့ သီချင်းဆိုပြီး နှတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၄နစ်အရွယ်မှာ ရှော့ပင်စင်တာထဲက သီချင်းဆိုပြပွဲမှာ တက်ဆိုချင်တာ ပေးမဆိုလို့ အာဗြဲကြီးနဲ့ ငိုတာ ပြိုင်ပွဲကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ကကြားလို့သူမကို ဆိုခွင့်ပေးရာမှ ဆုရခဲ့ဘူးပါတယ်။
သူမ ရဲ့ အယ်ဘမ် က နိုင်ငံတချို့ မှာ အရောင်းအကောင်းဆုံးအထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
All stories are translated from online UK newspaper, online web sites, online science websites and youtube. The aim of this blog is to record the interesting stories which I come cross through my reading habit. I would like to share my knowledge, extraordinary news and topics to Burmese people whom have not much enough resources to read. My reference paper are Dailymail, Metro, The Sun, Times, DailyExpress, Telegraph Star, Independent, Guardian, Mirror, Scotsman, Irish Times, People, Economist, Evening Standard, The Hearald, Record, Morning star, The week, spectator, Saga , EuroNews and youtube.
Technology - James Bond ဖြစ်ချင်သလား
News - Nice Sky Divers
News - White Lions in UK
Poem - ခေတ်သစ်မရွှေဖဲ
Poem - A day of my nyi ma lay
True story - ရှင်မွေးလွန်း
??? - ဟိုက်ေ-- ကျိုးနဲ ၁
Health - Twin
Poem - Clock နာရီလေး
Natural can't hide သဘာဝဟာ သဘာဝပါ
Technolog - Mars
Extra-ordinary ၅နစ်သမီး မျက်မမြင် စန္တားဆရာ
Funny - Ambulance constructed by Bird
Technology - smallest printer
Car - Latest 1 Horse Power Car နောက်ဆုံးပေါ်ကား
News - Halo 999လား ပုလိပ်ကား အခိုးခံရလို့ ပါ ဗျာ
Sport - Winbledon ၀င်ဘလေတန် ချန်ပီယံ
Animal - ဘယ်သူပြိုင်လို့ ကပါတော့နိုင် 4
Health - Deaft to chatter box အကြားအာရုံ
Sport - Tennis Girl's Title
News - Alien - ဂြိုလ်သားလား လူသားလား
Animal - ဘယ်သူပြိုင်လို့ ကပါတော့နိုင် ၃
Health - Body builder